Ọ bụghị Mgbalị Na-eju Ndị Mmadụ Anya | Martech Zone
Otu onye nrụpụta kachasị elu na ọrụ m taa gosipụtara akụkọ ọhụrụ nke o dere na ngwụsị izu. Ọ bụ akụkọ dị egwu, nke ejiri ọrụ nkwupụta SQL wuru, ọ na-eme ọfụma, ọ dị mma, ma a haziri ya nke ọma.
Ka anyị na-apịpụta ndị a dị n’ime anyị, onye nrụpụta ahụ kwuru na ọ ga-eju ndị na-arụ n’ụlọ ọrụ ahụ anya, mana ndị mmepe ndị ọzọ ga-enweta ntamu n’ihi na ha ma etu ọ dị mfe iji hazie akụkọ ahụ. Ndị mmepe ndị ọzọ nwere ike ịchị ọchị, mana ọ bụghị ha na-enweta nlebara anya.
Azaghachiri m onye nrụpụta na ọ bụghị mbọ na-eju ndị ahịa anyị ma ọ bụ ndị ọrụ anyị anya. Ha amaghi ihe o gha n’azu iji mee ihe n’agha. Ha achọghị ịma (dịka ha ekwesịghị) ma ọ bụrụhaala na ọ na-arụ ọrụ. Ọ bụ echiche, ebumnuche, na nke kachasị emetụta ndị mmadụ. Workrụsi ọrụ ike nwere ebe ọ ga-arụ, ya adịla mgbe m mere ihe ọjọọ. Otú ọ dị, ka m na-etolite, ana m ahụ ọtụtụ ndị mmadụ na-ebuli elu, na-aga nke ọma, ma ọ bụ bara ọgaranya - ọ bụghị n'ihi na ha rụsiri ọrụ ike, kama n'ihi na ha nwere nnukwu echiche, nnukwu echiche, ma ọ bụ nnukwu mmetụta.
Ọ bụ Echiche, Ebumnuche, na nke kachasị, Mmetụta nke na-eju ndị mmadụ anya - ọbụghị mbọ.
Nke ahụ apụtaghị na anaghị m arụsi ọrụ ike. Ana m arụ ọrụ mgbe niile - blog m bụ n'ezie ezumike m kwa ụbọchị. Na nri ehihie na ngagharị nke ehihie, oge fọdụrụ na-arụ ọrụ, n'ihe ndina, ịgụ akwụkwọ, ma ọ bụ oge ya na ụmụ m. Ahụrụ m ọrụ n'anya, ọ bụ ya mere m ji eme ya. Echeghị m na ọ dị ka ezigbo 'ol ụbọchị ebe' ịrụsi ọrụ ike na-akwụ ụgwọ '. Thosebọchị ndị ahụ dị ogologo n'azụ anyị! Workrụsi ọrụ ike nwere ike ịkwụ ụgwọ ndị ahụ, mana ọ naghị arụpụta oge na-adịghị anya. Ihe niile ị ga - enweta na ngwụsị nke ndụ gị bụ mkpokọta ọrụ emere.
Ọrụ onye nrụpụta a nwere ike ọ gaghị ewe nnukwu mbọ - mana echiche ya, ebumnuche ya ime ya, yana mmetụta ọ ga-enwe na ndị ahịa anyị ga-abụ ihe ụlọ ọrụ niile na-erite uru na ya.